ရန်ကုန်သို့တပတ်ရစ်ကားအစီးရေ၁၀၀၀တင်ပို့ပြီးခြင်းနှင့် မတ်လတစ်လတည်းအတွင်းFEU ကွန်တင်နာ ၁၃၁ လုံး ကိုတင်ပို့ပြီးခဲ့ခြင်း - Topics - Topics Myanmar
ရန်ကုန်သို့တပတ်ရစ်ကားအစီးရေ၁၀၀၀တင်ပို့ပြီးခြင်းနှင့် မတ်လတစ်လတည်းအတွင်းFEU ကွန်တင်နာ ၁၃၁ လုံး ကိုတင်ပို့ပြီးခဲ့ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့GTC ASIA ကုမ္ပဏီမှ၂၀၁၂ခုနှစ် မတ်လအထိကားအစီးရေပေါင်း၁၀၀၀ ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ FEU ကွန်တင်နာ ၁၃၁ လုံးကို မတ်လတစ်လတည်းအတွင်း တင်ပို့ ခဲ့ပြီးဆက်လက်၍လည်း ထပ်မံတိုးချဲ.ဆောင်၇ွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။
※ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါပုံ DAILY CARGO, Kaiji Press Co., Ltd.” of Mar 29th, 2012 တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(Japanese version ONLY).
※　GTC ASIA မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကွန်တင်နာဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းစနစ်၏ ကောင်းကျိုးများမှာ
◎　ကွန်တင်နာဖြင့်သဘောင်္ပို့ဆောင်မှုမှာ အပတ်စဉ် ၄ကြိမ် ရှိခြင်းနှင့် ကြာမြင့်ချိန်မှာ ရက်၂၀ ဝန်းကျင်တွင်သာရှိသည်။ ကားချည်းသက်သက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်သော(RO RO) စနစ် မှာ ဆိပ်ကမ်းသို. ဆိုက်ကပ်သောအ ကြိမ် ရေနည်းခြင်းနှင့် ဆိုက်ကပ်မည့်အချိန်မသေချာခြင်း တို့ကြောင့် ၄င်းစနစ်ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွန်တင်နာဖြင့်တင်ပို့ရာတွင်အားသာ ချက် များရှိခြင်း။
◎　ဆိုက်ကပ်သောဆိပ်ကမ်းမှာ လည်း အခြားသောသင်္ဘော များ၏ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်း များနှင့် မတူ ဘဲ ရန်ကုန်မြို.တွင်းမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော ၊ရန်ကုန်မြို.တွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်းများ၏ ကွန်တင်နာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန်.ပမာဏကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော ASIA WORLD ဆိပ်ကမ်း နှင့် Myanmar Industrial port ,Ahlone ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။၄င်းဆိပ်ကမ်းများမှ မိမိတို.၏ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များဖြင့်အချိန်တိုအတွင်း လွယ်လင့်တကူ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
◎　ပေ၄၀ပမာဏရှိသောကွန်တင်နာတစ်လုံးအတွင်း ကားစီးရေ ၃ စင်း ကို အတူတကွ တင်သွင်းပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်ကိုသက်သာစေပါသည်။
◎　အစီးရေ ၃စင်းမပြည့်သော ပို့ဆောင်မှု(ဥပမာ- တစ်စီးတည်း)ဖြစ်ပါကလည်း ညှိုနှိုင်းပြီး လုံခြုံမှုအပြည့်ဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။
§ Link to JETRO’s Q&A, regarding transporting used cars (Japanese version ONLY).
§ Topics to LCL consolidation service with Yangon port details
§ Topics to Used Automobiles Container Transporting Service to Yangon
31-03-2012 | Topics Archive